လေကောင်းလေသန့် ( Henry Aung ) — HiveHustlers
#myanmar #knowledge #proofofbrain #archon #neoxian #creativecoin #aeneas #hivelist #hivehustlers
facebook ကြည့်ရင် စိတ်မကောင်းစရာတွေများတယ်
မကြည့်ပဲလည်း မနေနိုင်ဘူးကိုးလို့ !PIZZA. !LOL. !LUV
ကျနော်လဲ အတူတူပဲ အကိုဟင်ရေ နေရတာ မွန်းကြပ်နေတာ။ !PIZZA
ကြိုးစားပြီးတော့ ရှင်သန်ရမှာပါ့။ !PIZZA. !LOL. !LUV
ဟုတ်တယ်ဗျာ တခါတလေ အသက်ရှုမဝသလိုကြီး ခံစားနေရတာ။ :(
အဖက်ဖက်က ကောင်းကွက်တခုမှ မရှိတော့ အသက်ရှူရတာလည်း မကောင်းတော့ဘူးပေါ့။ !PIZZA. !LOL. !LUV
ဟုတ်တာပေါ့.... တနေ့နေ့ပေါ့... !PIZZA. LOL. !LUV
ဟုတ်တယ်အစ်ကို အဲသလို ခံစားချက်မျိုးတွေ နေတိုင်းခံစားနေရတာပါ။ တစ်ခုခုနဲ့ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် နေသော်လည်း Facebook ဖတ်ပြီးတဲ့အခါ နဲ့ သေနတ်သံလိုလို ဗုံးပေါက်သံလိုလို ကြားရပြန်ရင် စိတ်က မကျေနပ်သလို ဖြစ်သွားပြန်ရော ။ အမြန်အောင်မြင် ချင်ပါဘိ....!PIZZA
ဟုတ်တယ်.... တခါတလေတော့လည်း ဘားမှကို တွေးမနေတော့ဘူး။ !PIZZA. !LUV. !LOL
htwegyi2months ago (edited)
လူတွေရဲ့ စိတ်တွေ ပြန်တည်ငြိမ်းဖို့ အတော်လုပ်ကြရပေအုံးမည်။
နိုင်ငံကြီး အေးချမ်းပြီးရင် လူတွေ အေးချမ်းဖို့ အရှိန်ရသွားမှာပါ။
အဲဒီအချိန်ပဲ အမြန်ရောက်ချင်မိ။ !LOL. !PIZZA. !LUV
မြင်ရကြားရတာတွေတော့ ကောင်းကွက်တခုမှ မရှိဘူး.... ကောင်းတော့ ကောင်းတယ် စိတ်ပျက်ဖို့။ !PIZZA !LOL. !LUV
babakyi2months ago
မဂ်လာပါ စာဖတ်ရတာ ကောင်းပါတယ် ခင်ဗျ
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ !LOL. !LUV. !PIZZA
စိတ်ကြည်လင်မှု့ မရှိတာတော့ အသေအချာပါ
အနာဂတ်က မှုန်ဝါးနေ လက်ရှိကမရေမရာ မြင်သမျှကြားသမျက စိတ်မချမ်းသာစရာ
မြင်ရကြားရတာတွေတော့ ကောင်းကွက်တခုမှ မရှိဘူး.... ကောင်းတော့ ကောင်းတယ် စိတ်ပျက်ဖို့။ !PIZZA. !LOL. !LUV
@kachinhenry(9/20) tipped @mamamyanmar (x1)
kachinhenry tipped babakyi (x1)